မာနေးထွက်သွားမှပဲ မုဒ်တွေအပြည့်နဲ့နှုတ်ဆက်စကားပြောခဲ့တဲ့ လီဗာပူးနည်းပြကလော့ပ် | Duwun
မာနေးဟာ ဒီကနေ့မှာပဲ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကစားသမားဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။
လီဗာပူးတိုက်စစ်ကစားသမား မာနေးဟာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့တရားဝင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး ဒီကနေ့မှာပဲ အသင်းသစ်နဲ့ တရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကစားသမားဟာ လီဗာပူးနဲ့အတူ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ (၆) နှစ်အတွင်း ပွဲပေါင်း (၂၆၉) ပွဲကစား၊ သွင်းဂိုး (၁၂၀) နဲ့ ဂိုးဖန်တီးမှု (၃၈) ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
လီဗာပူးရဲ့ တရားဝင်တွစ်တာအကောင့်ကနေ မာနေးကို တရားဝင်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ကလော့ပ်ကလည်း သူ့အတွက် အားကိုးရတဲ့ တပည့်ဟောင်းကြီးအတွက် ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ နှုတ်ဆက်စကား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကလော့ပ်က “ကြီးမားတဲ့အခိုက်အတန့်ပါပဲ။ ဘာမှမဖြစ်သလိုမျိုး ဟန်ဆောင်နေဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး”
“လီဗာပူးရဲ့ အကြီးကျယ်အခမ်းနားဆုံး ကစားသမားတွေထဲက တယောက် ထွက်ခွာသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး မာနေးက ကျနော်တို့အတွက် ဘယ်လောက်အထိ အရေးပါခဲ့လဲဆိုတာကို အသိအမှတ်ပြုရပါမယ်။ သူ သွင်းယူခဲ့တဲ့ဂိုးတွေ၊ သူ ယူပေးခဲ့တဲ့ ဆုဖလားတွေနဲ့ မာနေးက တကယ်ကို ဂန္တဝင်တယောက်ပါ။ ဒါက လီဗာပူးခေတ်တခုရဲ့ အမှတ်သညာလည်းဖြစ်ပါတယ်”
“ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက အင်တာဗျူးတခုမှာ ကျနော့်ကို မာနေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ စကားလုံးသုံးလုံးနဲ့ ပြောပေးပါဆိုပြီး မေးဖူးတယ်။ အဲ့ဒီလိုသုံးလုံးတည်းတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲ ကျနော် ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ မာနေးအတွက် စကားလုံးသုံးလုံးတည်းဆိုရင် ကျနော်အများကြီး ပြောစရာရှိပါတယ်။ World-class player လား? True club legend လား? Ideal role model လား? The perfect teammate, Compassionate, caring person အများကြီးပါပဲ”
“အခု ဒီနေ့ မာနေးအတွက် အသင့်တော်ဆုံးလို့ ခံစားရမယ့် စကားလုံးသုံးလုံးကတော့ “Will miss you!” သတိရနေမှာပါ ဆိုတာပါပဲ” လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ မာနေးဟာ အသက် (၃၀) အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး လီဗာပူးရဲ့ စာချုပ်သစ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုငြင်းဆန်ကာ စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေအတွက် ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကို ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။